Federico García Lorca. Makore 119 ekuzvarwa kwake. Mitsara nendima | Zvazvino Zvinyorwa
Mufananidzo naMariola DCA. Chiumbwa chaLorca muPaza de Santa Ana, Barrio de las Letras. Madrid.
Zvakaitika napakugara kwemwedzi zvakazadzikiswa 119 makore yekuzvarwa Federico Garcia Lorca. Nyanduri we Cowboys font akaona mwenje a 5 June we1898 uye anga ari mupfupi nguva pfupi. Asi nhaka yake haigoni kuyerwa uye nekukosha kweiyo husingaperi runako iyo yaunogona kugara uchifarira. Hupenyu hwake, kunzwisisika kwake, kuyeuka kwake, hunyanzvi hwake ... Izvo zvese zvinouya pasi kuti uenderere mberi nekuverenga nekuyemura icho. Nhasi ndinotora imwe kudiki sarudzo yemamwe emitsara yake nemavhesi.
1 Nyanduri muNew York
2 Ropa Muchato
3 Imba yaBernarda Alba
4 Bhuku renhetembo
Nyanduri muNew York
Ndinoda kuchema, nekuti ndinonzwa sekudaro.
Oo zvisina musoro! Ini handidi mubhedha kana kudya kwemanheru newe, uye hapana miniti yezuva yandisingade kuve newe, nekuti unondidhonza ndoenda, uye unondiudza kuti nditendeuke uye ndinokutevera nemumhepo kunge jasi rehuswa. Chiito Chechitatu - Tafura Yekutanga
Mushure mekuroora kwangu ndakafunga usiku nemasikati kuti yaive mhosva yei, uye pese pandinofunga nezvazvo, mhosva nyowani inobuda iyo inodya imwe; Asi panogara paine mhosva! Chechipiri chiito - Chekutanga furemu
Imba yaBernarda Alba
Anodzvinyirira munhu wese akamupoteredza. Iye anokwanisa kugara pamusoro pemoyo wako uye achikutarisa iwe uchifa kwegore usina kuvhara kunyemwerera kunotonhora pachiso chake chakashata. Chiito chekutanga
Uye ini handidi kuchema. Rufu runofanira kutariswa chiso nechiso. Nyarara! Chiito chetatu
Vakadzi mukereke havafanirwe kutarisa zvakawanda zvemurume pane anotarisa, uye imhaka yekuti ane masiketi. Chiito chekutanga
Zvandinoraira zvinoitwa pano. Hauchakwanise kuenda nenyaya kuna baba vako. Thread uye tsono yevakadzi. Chikwapuro uye nyurusi zvemurume. Ndozvazvinoitwa nevanhu. Chiito chekutanga
Nditeerere pasina mhepo. Tendeuka, mudiwa; tendeuka, mudiwa. vane
Kune kutapira kwehuvana mangwanani achiri. Izvo kusangana kweinokatyamadza hozhwa
Hapana chinhu chinokanganisa mazana emakore apfuura. Hatigone kuchema kubva kune chekare. Iyo yekuvhima
Iyo areka yekutsvoda kubva pamuromo yakatovharwa, ndeyekusingaperi nhapwa, yemoyo wehanzvadzi. Mangwana
Divine Kubvumbi, uyo anouya akatakurwa nezuva uye nezvakanaka, anozadza maruva dehenya nematendere egoridhe! Rwiyo rweChirimo
Harmony yakaitwa nyama ndimi pfupiso huru yerwiyo. Mauri unorara unotsamwa, zvakavanzika zvekutsvoda uye kuchema. Rwiyo rweuchi
Ini ndasvika pamutsetse panogumira kushuvira uye kudonha kwemisodzi kunova alabaster yemweya. Mumvuri wemweya wangu
Runyararo rwakajeka uye ipapo kutsvoda kwedu, sonorous polka madots eiyo echo, yaizovhura kure kure. Uye moyo wako unodziya, hapana chimwezve. Wish
Uye kunyangwe dai wanga usingandide, ini ndinokuda iwe nekuda kwekusuwa kwako kuita kunge lark inoda zuva idzva, kungoitira dova. Zhizha madrigal
Rasa kusuwa uye kushushikana. Hupenyu hwakanaka, hune mazuva mashoma uye chete ikozvino isu tinofanirwa kunakirwa. Butterfly Hex
Iko kutsvoda kwekutanga kwakaravira sekiss uye kwaive kwevana vangu miromo kunge mvura nyowani. Yemukati ballad
Mvura ine chakavanzika chisina kujeka cheunyoro, chimwe chinhu chekusiya basa uye chemhando kukotsira. Mumhanzi unozvininipisa unomuka pamwe naye uyo unoita kuti mweya wakarara wenzvimbo uteme. Kunaya
Pamureza werusununguko ndakashongedza rudo rukuru rwehupenyu hwangu. Mariana pineda
Kuva woga ndiko kuveza kukuru kwemweya. Zvinyorwa uye nharaunda
Munhu akafa kuSpain mupenyu zvakanyanya semunhu akafa pane chero kupi zvako pasi. Mutambo uye goblin dzidziso
Pane zvinhu zvakapoteredzwa mukati memadziro izvo, kana vakangoerekana vabuda vachienda mumugwagwa vachideedzera, vaizozadza nyika ngomwa
Girini ndinoda iwe girini. Mhepo yakasvibirira. Green matavi. Ngarava pagungwa uye bhiza pagomo. Gypsy kudanana.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Zvazvino Zvinyorwa » Literature » Vanyori » Federico García Lorca. Makore 119 ekuzvarwa kwake. Mitsara nendima
Nely Garcia akadaro
Nyanduri akashanduka kuita ngano anoratidzira nguva inosuruvarisa munyika medu uye anotipa runako rwenhaka yetsika, panguva imwechete iyo inoshanda sereferenzi.
Pindura Nely García
Iko kuunganidzwa kwenhetembo "Zvakawanda sekurwadziwa" naTyler Knott iko zvino kuri kutengeswa
Matipi manomwe ekusarudza iro rakakwana zita rebhuku rako